Soo-saareyaasha Madoobiyeyaasha & Alaab-qeybiyeyaasha - Shiinaha Makup Mirror Factory
Muraayadda Qurxinta Gacanta ee Qurxinta Dad-gacmeedka Qalabka-DIY Qalabka Qalabka DIY 512005A
Muraayada kulul ee lagu iibiyo (Iftiinka qorraxda oo sii dhaceysa) Mawduuc lagu dhejiyay DIY Qalabka wax lagu qurxiyo oo lagu qurxiyo bilaaweyaal laba-geesle ah oo bilaash ah, isticmaal gacmo-sameysmo daabac leh oo saddex-geesood ah, gacanta ha sameyso si aad u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.
Muraayadda Qurxinta Gacanta ee Qurxinta Dad-gacmeedka Qalabka-DIY Qalabka Qalabka DIY 512005B
Muraayadda Qurxinta Gacanta ee Qurxinta Dad-gacmeedka Xirmooyinka Qalabka DIY ee Qalabka DIY 512006A
Muraayada kulul ee lagu iibiyo (Dooxada aamusnaanta leh, carafku waa meel walba) Mawduuc lagu qurxiyo DIY Embroidery Kit Lagu qurxiyay bilaawe muraayad ah oo laba-geesle ah, isticmaal gacan-sameys lagu sameeyay oo saddex-geesood ah, gacantu ha sameyso si aad u muujiso dareenkaaga Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.
Muraayadda Qurxinta Gacanta ee Qurxinta Dad-gacmeedka Qalabka-DIY Qalabka Qalabka DIY 512006B
Muraayadda Qurxinta Gacanta ee Qurxinta Dad-gacmeedka Qalabka-DIY Qalabka Qalabka DIY 512007A
Muraayada kulul ee lagu iibiyo (Udugga Tulip) Mawduuc lagu qurxiyo Qalabka wax lagu qurxiyo ee DIY Lagu qurxiyo bilowga muraayadaha laba-geesoodka ah, isticmaal gacmo-sameysmo daabac leh oo saddex-geesood ah, gacanta ha u sameyso dhoofintasdareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.
Muraayadda Qurxinta Gacanta ee Qurxinta Dad-gacmeedka Qalabka-DIY Qalabka Qalabka DIY 512007B
Muraayada kulul ee lagu iibiyo (Udugga Tulip) Mawjadda lagu Dhoobay Qalabka wax lagu qurxiyo ee DIY Lagu qurxiyo bilowga muraayadaha laba-geesoodka ah, isticmaal gacan-sameys lagu sameeyay saddex-geesood ah, gacanta ha u sameyso si aad u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.
Muraayadda Qurxinta Gacanta ee Qurxinta Dadweynaha Farshaxan gacmeed Iskutallaab ah DIY Qalabka DIY Qalabka 512008
Muraayada kulul ee lagu iibiyo (Marwada Casaanka ah) Mawjadda Qalabka DIY ee wax lagu qurxiyo oo lagu qurxiyo Bilowga muraayadaha laba-geesoodka ah, isticmaal gacan-sameys lagu sameeyay saddex-geesood ah, gacanta ha u sameyso si aad u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.
Muraayadda Qurxinta Gacanta ee Qurxinta Dadweynaha Farshaxan gacmeed Iskutallaab ah Qalabka Qalabka DIY ee Dhirta 512009
Muraayada kulul ee lagu iibiyo (Coccinella septempunctata) Mawduuc lagu qurxiyay DIY Embroidery Kit Lagu qurxiyay bilaawe muraayad ah oo laba-wajiile ah, isticmaal gacan-sameys lagu sameeyay oo saddex-geesood ah, gacantu ha sameyso si aad u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.
Muraayadda Qurxinta Gacanta ee Qurxinta Dadweynaha Farshaxan gacmeed Iskutallaab ah Qalabka Qalabka DIY ee Dhirta 512010
Muraayada kulul ee lagu iibiyo (Quruxda Rose) Mawjadda Xidhmada ah ee Qalabka DIY ee Wax lagu qurxiyo Bilowga muraayad laba-geesood ah oo bilow ah, isticmaal gacan-sameysid daabac saddex-geesood ah, gacanta ha u sameyso si aad u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.
Muraayadda Qurxinta Gacanta ee Qurxinta Dadweynaha Farshaxan gacmeed Iskutallaab ah Qalabka Qalabka DIY ee Dhirta 512011
Muraayada kulul-iibinta (Cinabyada xilliga dayrta ee macaan) Mawjadda Qalabka DIY ee Wax lagu qurxiyo Lagu qurxiyo bilaaweyaal laba-geesleyaal ah oo bilow ah, isticmaal daabac gacan-sameys ah oo saddex-geesood ah, gacanta ha u sameyso si aad u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.
Muraayadda Qurxinta Gacanta ee Qurxinta Dad-gacmeedka Qalabka-DIY Qalabka Qalabka DIY 512012
Muraayada kulul ee lagu iibiyo (Qurxinta miro guduudka casaanka ah) Ubax Baahiyaha Muraayadaha Dhaqanka Dadweynaha Farshaxanka iskutallaabta Qaababka Qalabka DIY Qalabka Kabaha, adeegso gacmo-sameysmo saddex-geesood leh, gacantu ha sameyso si aad u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.
Muraayadda Qurxinta Gacanta ee Qurxinta Dad-gacmeedka Qalabka-DIY Qalabka Qalabka DIY 512013
Muraayada-iibinta kulul (Muraayad) Ubax Baahiyaha Muraayadaha Shaqada Dadweynaha Farshaxanimada Xirfadaha iskutallaabta Qaababka Qalabka DIY Qalabka Kabaxa, isticmaal gacmo-sameysmo daabac leh oo saddex-cabbir leh, u oggolow gacanta inay sameyso si aad u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.